Thomas Tuchel ayaa lagu canaantay "qalad weyn"
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa lagu dhaleeceeyay inuu sameeyay “qalad aad u xun” markii ay kooxdiisu isku diyaarisay kulanka sideedaad ee Champions League ee ay la ciyaarayaan Atletico Madrid.
“Alxamdulilaah, waxaan aadayaa qabriga
Laacibka kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel, oo lagu dhawaaqay inuusan guuldaro la kulmin dhamaadkii bishii Janaayo, ayaa kooxda u dhaqaaqay kaalinta afaraad ee kala baxa Horyaalka Premier League iyo FA Cup-ka.
Laakiin kulanka caawa ee Champions League ee ay la leeyihiin Atletico Madrid ayaa ku soo beegmaya xilli dareenka qaar ka mid ah ciyaartoyda uu is beddelay, ka dib go’aanno xun oo isbuucaan qaatay, taasoo ciyaartoyda qaar niyad jab ku riday.
Halyeeyga Liverpool Jamie Carragher ayaa ku dhaleeceeyay Thomas Tuchel inuu sameeyay “qalad weyn” kulankii Southampton ay barbaraha la galeen weeraryahanka reer England Tammy Abraham waqtigii nasashada, isagoo bedelay Cllum Hudson-Odoi. Daqiiqado kadib, wuxuu markale shaqada ka caydhiyay Hudson-Odoi isagoo markii dambe dhaliilay saxaafada.
Jamie Carragher oo la hadlayay Sky Sports ayaa tilmaamay in tababaraha Jarmalka uu sameeyay “qalad” taas oo wiiqday kalsoonida ciyaartoydiisa, xilli muhiim ah oo Champions League ah oo ay la ciyaarayaan Atletico Madrid.
Tababarayaasha waxaa lasiiyaa lacag si ay u gaaraan go’aano una soo saaraan natiijooyin. Haddii Tuchel uu dareemo in go’aanka uu kordhiyo fursadaha guusha isla markaana uu ka caawiyo Chelsea inay gaarto isreebreebka Champions League, dhib malahan. “Carragher ayaa leh.
Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi: “Hudson-Odoi waxa uu lumiyay kubbada toddobo jeer iyo 18 jeer, markaa dhib ayay ahayd, laakiin laba jeer ayuu miskiin ahaa oo uu eryanayay kubada.
“Markii uu tababaruhu sheegay inuusan ku faraxsanayn weerarkiisa – uma arko dhibaato.
“Laakiin dhibaatada tababaraha ayaa ah in uuna isagu markii hore wax ka qaban oo aanu sheegin wixii uu yidhi ciyaarta kadib. Waxaan u malaynayaa inuu qaldanaa markii uu ciyaarta ka saaray (Hudson-Odoi) oo uu markii dambe ka hadlay.”
Hutu rebels accuse DRC, Rwanda of Italian